Sunday August 18, 2019 - 07:28:50 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com - Shirkadda Hormuud ayaa udub dhexaad u noqotay taageerada argagixisada ayadoo noqotay Shirkad isku difaacda kuna amusisa dadka dhaqaala ahaan uga soo horjeeda. Waxaa la xasustaa in 21 July 2017 xafiiska Raisulwasaraha uu warqad kasoo
Waagacusub.com - Shirkadda Hormuud ayaa udub dhexaad u noqotay taageerada argagixisada ayadoo noqotay Shirkad isku difaacda kuna amusisa dadka dhaqaala ahaan uga soo horjeeda. Waxaa la xasustaa in 21 July 2017 xafiiska Raisulwasaraha uu warqad kasoo saaray kuna eedeey Shirkada Hormuud inay tahay Shirkad argagixiso.
Dadka la eedeeyay waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Yusuf oo ah CEO ama Maamulaha ugu sareeya Shirkada Hormuud, Maxamed Yusuf Caraale oo ah ninka maamula Salaam Somali Bank oo uu iska leeyahay ninka Hormuud Ugu share-ka badan, Cabdirashiid Ducale oo asagana ah Maamulaha ugu Sareeya ee Dahabshiil.
Hormuud ayaa sidoo kale ka caawisa Argagixisada Al-Shabaab dhinca Sirdoonka maadama loo ogol yahay inay gasho xarumaha aadka loo ilaaliyo ee Dowladda Somalia taas oo si muuqata ay umada u ogtahay waxana ka mid ah weerarkii Argagixisada Shabaab ku qaadeen Madaxtooyadda Somalia oo warbixinta iyo in ay meesha galaan u fududeeyey Nin caan ah oo ka tirsan shirkada Hormuud oo la yirahdo Xasan Muxudiin Xasan [Ina Bustooladweyne]. Maamulahii Xarunta Hormuud Telecom ee Madaxtooyadda.
Ugu danbeeyn Shirkadda ayaa lacago ka sameeyso Qaraxyada maadama markuu qarax dhaco ay dadkoo dhan is wacaan si qofkastaa eheladiis u ogaato in qofkoodo uu nool yahay ayadoo xitaa mararka qaar dibada dadka ka soo wacaan taas oo ah mid lacag badan uga soo xaroota Hormuud telecom, dhinaca kalena Shirkadu waxey sameeyso Khabuuraha Al-Barakaat iyadoo dadka soo dhinta qofka ugu yar laga qaado boqol dollar.
Dowladda Somalia ayey tahay iney Shacabkeeda ka difaacdo Shirkadda Argagixisada ah ee Hormuud. Maadama ay ogtahy waxa jira.
[DAAWO] Cadeyn Fuad Blue makeup waxaa dhalay Nin caana ! Waa kuma?
[DAAWO CCTV] Cabdalla Maalin Forex Ninkii Somalida ka dhacay 160 Milyan oo dollar iyo Sir xasaasiya.
[DAAWO Sirtii aduunka:] Cod si sira looga duubay Saciid Geelle intaan la dilin ka hor oo cadeeynaya sababihii?
Aqoonyahan Warbixin Cajiiba ka qoray Sida Axmednur Jimcale u duleeystay ummadda Soomaaliyeed